एक व्हीलचेयर मा हुँदा तपाइँको जीवन अधिकतम Karman® व्हीलचेयर
एक व्हीलचेयर मा हुँदा आफ्नो जीवन अधिकतम
प्रकाशित नोभेम्बर 22, 2020 नोभेम्बर 24, 2020 by सीएसआर १1688
के तपाइँ तपाइँको भन्दा धेरै प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ जीवन एक मा हुँदा व्हीलचेयर? कोहि भन्छन् कि के हो एक व्हीलचेयर मा हुनुको लागी हानि? तर यदि तपाइँ गिलास १/२ पूरा हेर्नुहुन्छ, हामी आफैंले यसलाई सकारात्मक दायरा बाट हेर्दैछौं।
हामी कसरी एक संसार मा सबै भन्दा धेरै पाउन सक्छौं जहाँ मानिसहरु आफ्नो काम को धेरै जसो हतार हतार, हिड्ने, र पूरै दिन वरिपरि हिड्ने?
जे होस्, कसैले पनि उनीहरुको योजना बनाउँदैन जीवन मा रहेको एउटा व्हीलचेयर तर जीवन त्रासदीहरु संग तपाइँ आश्चर्यचकित मा यति अनिश्चित छ। केवल एक डरलाग्दो दुर्घटना तपाइँको सम्पूर्ण परिवर्तन गर्न सक्छ जीवन, र तपाइँ मा जानु पर्छ जीवनशैली जुन तिमीले कहिल्यै सोचेनौ। तर तथ्य जीवन हो केवल एक त्रासदी वा संग रोकिदैन असक्षम; तपाइँ फरक सोच्नु पर्छ कि तपाइँ संगै फेरि जन्मेको छ नयाँ जीवनशैली र सिक्न को लागी कसरी तपाइँको जीवन को सबैभन्दा बाहिर प्राप्त गर्न को लागी एक मा सीमित छ व्हीलचेयर.
यसको अतिरिक्त, मा कसरी हरेक रमाईलो समायोजित गर्न जान्नुहोस् जीवन तपाइँको अनुकूलन द्वारा व्हीलचेयर.
यो तपाइँ तपाइँको मा सहज दिन को लागी मद्दत गर्दछ नयाँ जीवनशैली कैदबाट बाहिर केहि पीडा लिन। तेसैले, तपाइँ एक सामान्य मा फिर्ता हुन चाहानुहुन्छ जीवनशैली तर यसको सट्टा आफैलाई कोठामा सीमित गर्न को लागी, एक संग संसार को अन्वेषण गर्नुहोस् व्हीलचेयर। यो एक मा हुनु को हानि बाट टाढा पनि लिन्छ व्हीलचेयर.
हामी यहाँ छौं तपाइँलाई यो चुनौतीपूर्ण यात्रा मा तपाइँको लागी यो फूल बनाउन को लागी मद्दत गर्न को लागी।
जे होस्, तपाइँ अझै पनी संग बाहिर निस्कने प्रबन्ध गर्न सक्नुहुन्छ एउटा व्हीलचेयर र फेरि विश्वको हिस्सा हुन गर्व हो। यहाँ केहि तरीकाहरु तपाइँलाई मद्दत गर्न को लागी तपाइँको जीवन को सबैभन्दा बाहिर प्राप्त गर्न को लागी एक मा सीमित छन् व्हीलचेयरYourself आफैंमा विश्वास राख्नुहोस्
कुनै पनि स्थिति मा आशा गुमाउनु हुँदैन; आफैंमा विश्वास राख्नुहोस् र यसलाई एक अनुस्मारकको रूपमा सेट गर्नुहोस् असम्भव छैनतपाइँको जीवन मा अवस्थित छैन।
यसको अतिरिक्त, यो लाभ उठाउने प्रयास गर्नुहोस् र आफैंलाई फेरि सम्झाउनुहोस् कि तपाइँ केहि गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँ चाहानुहुन्छ। लज्जास्पद महसुस गर्दै, बहाना बनाउँदै र आफैंलाई बोझ मान्दा तपाइँको बनाउँछ जीवन केहि छैन तर सबैभन्दा खराब। आफैं वा अरुलाई तपाइँको सपना बिगार्न नदिनुहोस्। तपाइँ आफैं र विश्वास मा विश्वास संग तपाइँको सपनाहरु लाई पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। मनमा ती महान मानिसहरु को उदाहरण जो राख्नुहोस् गरे उनीहरुको नामaमा बसेको छ व्हीलचेयर। साथै यो संसार लाई देखाउँछ कि केहि पनी तपाइँ लाई रोक्न सक्दैन जब तपाइँको उद्देश्य उच्च छ। तपाइँ जीवनमा के चाहानुहुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्
अब बाहिर के तपाइँ नियमित शौक को लागी के गर्न को लागी माया गर्नुहुन्छ।
यसको अतिरिक्त, यो तपाइँको अतीत बाट केहि हुन सक्छ जुन तपाइँ पहिले रमाईलो गर्नुभयो। यो समय सबै इच्छाहरु र शौकहरु जो तपाइँ जिउँदो सबैभन्दा खुशी व्यक्ति बनाउन सक्नुहुन्छ तल कलम गर्न को लागी। तपाइँ गिटार, लेखन, स्केचिंग, वा तपाइँको अतीत मा अरु केहि माया गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो बिस्तारै तपाइँको सबै शौकहरु लाई पुनः सुरु गर्न को लागी सही समय हो र तपाइँको दैनिक दिनचर्या मा उनीहरुलाई सामेल गर्न को लागी। जीवन मा तपाइँको इच्छाहरु लाई शामिल गर्न को लागी जान्नुहोस्
ईर्गो फ्लाइट एस-शेप्ड सिटिंग सिस्टम
तपाइँ तपाइँको मा चीजहरु लाई समावेश गर्न सिक्नु पर्छ जीवन बिस्तारै तर निश्चित रूपमा।
उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ गिटार लाई माया गर्नुहुन्छ, तब यो हुन सक्छ असम्भव देखिन्छ एक मा खेल्न को लागी व्हीलचेयर। तपाइँ सबै गर्न सक्नुहुन्छ एक गिटार बनाउन छ व्हीलचेयर। यो पागल लाग्छ, तर यो होइन किनकि त्यहाँ तपाइँको गिटार र एम्पलीफायर माउन्ट गर्न को लागी धेरै तरिकाहरु छन्। यस बाहेक, तपाइँ तपाइँको मा केहि पनि एकीकृत गर्न सक्नुहुन्छ नियमित व्हीलचेयर जस्तै सिलाई र बुनाई, स्केचिंग, फुटबल, र लेखन। यो थकाऊ लाग्न सक्छ तर यो महत्वाकांक्षी मानिसहरु को लागी होईन जो आफ्नो सपनाहरु लाई दिन सक्दैनन्।
तपाइँ वरपर सकारात्मक व्यक्तिहरु जो प्रेरणा र तपाइँ असाधारण केहि गर्न को लागी प्रेरित र नकारात्मक मानिसहरु बाट छुटकारा पाउनुहोस्।
नतिजाको रूपमा, क अनुकूलित व्हीलचेयर तपाइँको विशिष्टताको अनुसार निर्माण गर्न सकिन्छ जीवनशैली नं फरक पर्दैन कि तपाइँ बच्चा, युवा, मध्यम आयु वा एक बूढो व्यक्ति हुनुहुन्छ। आफैलाई सकारात्मकता संग घेर्नुहोस्
तपाइँको नजिक र प्रियजनहरु संग बस्न रमाईलो गर्ने तरिकाहरु खोज्नुहोस्। आशावादी मानिसहरुको वरिपरि बस्नुको अर्थ एक जीवित रहनु हो जीवन रमाईलो, अविस्मरणीय यादहरु, र एकता को भावना को पूरा। उनीहरु तपाइँको मा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रभाव छोड्छन् जीवन जस्तै कि उनीहरु तपाइँ मा सकारात्मक गुणहरु लाई अँगाल्छन्। पनि सुधार गर्नुहोस् तपाइँको भलाई, तपाइँलाई राम्रो छनौट गर्न को लागी मद्दत, तपाइँ तपाइँको सपनाहरु लाई पछ्याउन र तपाइँको लक्ष्यहरु लाई प्राप्त गर्न को लागी प्रेरित गर्दछ। बिस्तारै तपाइँ तपाइँको मा अधिक दृढ बन्नुहुन्छ जीवन आफैंलाई सकारात्मकता संग घेरेर र नकारात्मकता बाट टाढा हिड्दै।
आफ्नो आहार को जाँच र सन्तुलन राख्नुहोस्
थप महत्त्वपूर्ण, तपाइँको मनपर्ने खाना को आनन्द लिनुहोस् र तपाइँको दैनिक कैलोरी को अतिरिक्त जलाउन नबिर्सनुहोस्। पाउन्ड प्राप्त गर्दै एउटा व्हीलचेयर जो एक मा सीमित छन् मा सबै भन्दा साधारण कुरा हो व्हीलचेयर। यो 'असम्भव छ आफूलाई मनपर्ने खाना को लागी तृष्णा बाट रोक्न। तर यो उपयुक्त भाग मा लिईरहेको छ र एक सानो परिमार्जित तरीका मा बाहिर काम धेरै धेरै छ सम्भव। जब हामी परिमार्जित कसरत भन्छौं, यसको मतलब तपाइँ तपाइँको हात, टाउको, वा शरीर को कुनै भाग को लागी थोरै आन्दोलन गर्न सक्नुहुन्छ।
जे होस्, तपाइँको मस्तिष्कलाई स्वस्थ चीजहरुमा संलग्न गर्नुहोस् किनकि यसलाई सबैभन्दा धेरै ऊर्जा चाहिन्छ, र यो कसरत पनि हो। एक नियन्त्रण भाग मा हरेक मनपर्ने खाना आइटम लिन को लागी प्रयास गर्नुहोस् र समय को पालन गर्नुहोस् किनकि अधिकांश मानिसहरु जो छन् व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताहरु उनीहरुको उचित स्वस्थ आहार लाई बेवास्ता गर्नुहोस् जसको कारण छिटो वजन प्राप्त हुन्छ। मोटापा पनि अवसाद हो र यो बाट आफूलाई बचाउन को लागी धेरै प्रयास गर्नुहोस्।
एक व्हीलचेयर केवल एक होईन व्हीलचेयर। तपाईंको आधारमा जीवनशैली, तपाइँ तपाइँको मा एकीकृत गर्न को लागी विभिन्न मोडेलहरु को सबै प्रकार को चयन गर्न सक्नुहुन्छ व्हीलचेयर.
13lbs LT -980 - अल्ट्रालाइट वजन एक व्हीलचेयर बाट सबैभन्दा धेरै प्राप्त गर्न
यसको अतिरिक्त, त्यहाँ धेरै छन् प्रकार of व्हीलचेयर जो आराम थपिन्छ तपाईंको जीवन, र तपाइँ मा बस्नु पर्दैन क्लन्की व्हीलचेयर मोडेलहरु। तपाइँ अझै पनी स्वतन्त्रता महसुस गर्न सक्नुहुन्छ जीवन, तपाइँ मात्र नवीन हुन वा को लागी हेर्न को लागी आवश्यक छ दायाँ व्हीलचेयर आराम, सुविधा, र मन को शान्ति जो तपाइँ सामान्य मानिसहरु लाई देखे पछि को लागी चाहानुहुन्छ।
जे होस्, तपाइँलाई थाहा छ कि हुन सक्छ जीवन गुलाबको ओछ्यान होइन; त्यहाँ धेरै उतार चढावहरु छन् जुन तपाइँ संगै सामना गर्नु पर्छ जबकि तपाइँको सपनाहरु को यात्रा मा जाँदै हुनुहुन्छ। कुनै पनि बाधा को लागी आफैलाई तयार गर्नुहोस् र दृढ संकल्प, स्थिरता र तपाइँको लक्ष्य को लागी जुनून संग टाढा लात। त्यहाँ थुप्रै छन् जो आफूलाई सीमित गर्न को बावजूद एउटा व्हीलचेयर संसारलाई उनीहरुको क्षमताहरु देखाइएको छ कि उनीहरु वास्तव मा एक राम्रो खेल मा राख्न सक्छन् सबै भन्दा राम्रो सामान्य एथलीटहरु को उपस्थिति मा। A मा सीमित व्हीलचेयर यसको मतलब यो होइन कि तपाइँ आन्दोलन संग केहि गर्न सक्नुहुन्न; यसको मतलब तपाइँ अझै पनी महान गर्न सक्नुहुन्छ तर फरक तरीकाले। जीवन छआफैलाई खोज्न को बारे मा; यो आफैं बनाउन को बारे मा छ। त्यसोभए, यो यात्रामा आफैंलाई बनाउनुहोस् र संसारलाई देखाउनुहोस् तपाइँ अब केहि मा केहि अपवाद हुनुहुन्न।
यो प्रविष्टि मा पोस्ट हल्का व्हीलचेयर, रिटेल, व्हीलचेयर, व्हीलचेयर समाचार र ट्याग एक कुर्सी, हल्का व्हीलचेयर, हल्का व्हीलचेयर, गतिशीलता, व्हीलचेयर समाचार, व्हीलचेयर यात्रा, व्हीलचेयर प्रयोगकर्ता, व्हीलचेयर.
यो कसरी हामी अपाic्गता भएका मानिसहरुलाई समर्थन गर्न सक्छौं
इतिहास र व्हीलचेयर को विकास